Hlola i-Kamakura, Japan - World Tourism Portal
Hlola iKamakura, Japan
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eKamakura, Japan
Okufanele ukwenze Kamakura
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yaseKamakura
Bukela ividiyo emayelana neKamakura
Hlola i-Kamakura, idolobha elincane n i-Kanagawa Prefecture, Japan. IKamakura ithandwa ngamathempeli ayo amaningi ahlukile kanye namabhishi ayo anomoya opholile.
Ubufakazi bukhombisa ukuhlala kwabantu eKamakura okungenani i-10,000 eminyakeni edlule. IKamakura yayiyinhloko-dolobha yezombusazwe eJapan ngesikhathi seKamakura shogunate, isuka kwi1185 iye kwi1333. NgoJulayi 3, 1333, ukubusa kwemindeni yamaHōjō kwaphela ngoSiege waseKamakura. Kulinganiselwa ukuthi ngaphezulu kwe-6,000 abantu bazibulala ngalolo suku. Ku-1956, amathambo we-556 wabantu abashona ngobudlova ngaleso sikhathi batholakala.
Ngemuva kokuba iqembu likaTokugawa lithuthele enhlokodolobha ukuba ibe namuhla Tokyo, IKamakura yaqhubeka nokuwohloka kwayo ukuze ibe idolobhana nje labadobi. Nge-1910, inani labantu lase linqabile kubantu be-7,250.
UKamakura uthole ukulimala okubalulekile ngesikhathi kuzamazama umhlaba iGreat Kantō ye-1923.
Ungafinyelela eKamakura ngendiza nangesitimela.
IKamakura inkulu kakhulu nje ukuthi ingamboza ngezinyawo, kepha inethiwekhi yamabhasi iyaphuma esiteshini sesitimela. IKotokuin neHasedera zingafinyelelwa ngokuthatha i-Enoden line eyeka kathathu esiteshini sakwaHaka. Enye inketho ukuqasha ibhayisekili.
Kulabo abanamandla, kukhona ukuhamba kahle okuhle kusuka ethempelini laseJōchiiji nokuphela ngaseKōtokuin. Uzohamba, ngokukhuphuka okuthile, ngokusebenzisa ehlathini. Leli hhothi lidlula naseZeniarai Benten Shrine, uma unelukuluku ngomkhosi wokuwasha imali. Ukuhamba kuthatha cishe amahora we-3, uma futhi ume futhi uvakashele amathempeli endleleni. Noma ehlobo, umthunzi osendleleni uyakwazi ukugcina izinga lokushisa libekezeleleke. Uma usohambweni losuku, ukwenza okulinganiselwe kunganciphisa amathuba okuvakashela amanye amathempeli angenakufinyeleleka.
Ukubona kukaKamakura kusakazekele kulo lonke idolobha. Abavakashi abaningi benza umugqa we-beeline UBuddha Omkhulu futhi umise e-Hase Kannon endleleni; le mibono ingagcwele kakhulu ngezimpelasonto nangamaholide. Ihhovisi Labavakashi Lezokuvakasha elingaphandle kwempumalanga yesiteshi linikeza imephu yesiNgisi enemizila enconywayo ethandwayo kufaka phakathi indlela yehora le-4.
IKamakura inezindlela eziningi zokuhamba ezintabeni ezinganikeza impumuzo ezixukwini ezindaweni ezithandwayo ezitolo naseethempelini. Inkambo yokuhamba ngezinyawo kukaDaibutsu iqala amamitha angamakhulu ambalwa ezansi nomgwaqo osuka eKōtokuin. Lo mzila unamakhambi amaningi aholela ezindaweni ezithile ezingcwele namathempeli. Uma lina lina muva nje, umkhondo ungaba nodaka futhi kunezigaba eziningana ezimbaxekile.
IKamakura akuyona nje idolobha elingokomlando elinethempeli eliningi, amathempeli nezinye izakhiwo zomlando - kukhona nezinye ezidumile amabhishi eKamakura. Ungawuzwa umoya oGwini lwaseShonan elangeni elikhanyayo futhi ube nesikhathi esihle lapho, ikakhulukazi ehlobo.
· I-Yuigahama . Leli bhishi elimele e Kamakura, abantu abaningi bahambela ehlobo ukuyojabulela ukugeza olwandle lapho. Kuyindawo futhi yokubuka okuhle kombukiso womlilo owenziwe ehlobo. IKamakura idume ngeziqhumane zomlilo zasemanzini. (Khumbula nje lapho uhamba ngaleli bhishi ukuthi akubanga kudala kakhulu lapho kwatholakala amakhanda amaningi ancishisiwe angcwatshwa ngaphakathi kwesihlabathi futhi atholakala. Amakhanda ayesegugile, kusukela enkathini lapho iJapan yayingeyona indawo enobungane kanjena).
· Inamuragasaki. Lokhu futhi lolwandle oludumile. The Inamuragasaki Park (Inamuragasaki Kōen) itholakala lapho futhi yaziwa ngokushona kwelanga. Izidumbu zikaHojo, uhulumeni kaKamakura, zacekelwa phansi lapho e1333. Kulandela ku-National Road 134.
· Shichirigahama. Lokhu futhi kungulwandle oludumile eKamakura. Ngeshwa, ukubhukuda kwenqatshelwe. Kepha kusewugwini oluhle lokuphumula futhi ube nesikhathi esimnandi. Abasubeki abaningi bathokozela ukusebenzisa i-surf lapho.
UKamakura udume ngebhisikidi elibizwa I-Hatosabure, ibhisikidi elibunjwe njengejuba. Kuthengiswe eduze kwesiteshi saseKamakura futhi kuthandwa kakhulu ukuthula (isikhumbuzo) phakathi kwamaJapan.
Ngenye indlela, hlanganisa ukunambitheka okuhle nokunambitheka okubi ngokuthenga iphakethe lama-Giant Buddha amajikijolo abunjiwe agcotshwe ngobhontshisi obomvu, othengiswa endaweni yama-souvenir kanye naseKotokuin.
Kunezindawo eziningi zokudla eduze kwesiteshi sesitimela. Ukuthola umthamo, zama ubuchwepheshe bendawo, amazambane onsomi ethambile i-ayisikhilimu (murasaki-imo sofuto), enambitheka kangcono kakhulu kunokuzwakala (noma ukubukeka). Kwenziwe ngembiza yamaphunga amnandi ansomi atholakala kuyo yonke iJapan.
Emgwaqweni iKomachi, kune-cracker yerayisi (o-senbei) uthenga lapho ungadlela khona owakho o-senbei.
Ezinyangeni zasehlobo, imigoqo eminingi yesikhashana ibekelwa olwandle oluya eningizimu ukusuka esiteshini sesitimela, ezinye zazo zibonisa amabhendi bukhoma nama-DJ's futhi ngokuvamile kuyinto enhle kakhulu. Futhi ungaphuthelwa isitimela sokugcina esiya ekhaya uma uhlala kuso Tokyo, Indawo yokuhlala yokugcina yokugcina kusihlwa akuyona nje inketho phakathi nezinyanga zasehlobo ezixakekile.